Wararka Maanta: Khamiis, July 19, 2012-Ra'iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo Xubno ka socda Beesha Caalamka oo la kulmay Odyaasha Dhaqanka
Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamka, C/llaahi Goodax Barre ayaa ugu baaqay odayaasha inay maalinta berri ah soo gudbiyaan ergooyinka ansixinta dastuurka, si odayaashu ay ergooyinka u geeyaan goobta uu shirku ka dhacayo.
"Shardi ma ahan in oday walba ergooyinkiisa oo dhan uu horkaco, balse inta uu hayo ayuu soo diiwaan-geliyo, waayo waqti lama hayo," ayuu yiri Goodax, isagoo sheegay in howsha ay sidaas ku socon doonto.
Dajire Wamunyinyi oo isaguna odayaasha la hadlay ayaa sheegay ka dalbaday inay fududeeyeen soo gudbinta liiska ergooyinka laga sugayo maadaama waqtiga uu yar yahay, isagoo sheegay in la doonayo in howlaha harsan ay waqtigii loogu talogalay ku dhammaadaan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali oo isaguna odayaasha hadalkii ugu dambeeyay u jeediyay odayaasha dhaqanka ayaa ugu baaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo xulaan ergooyinka ansixinta dastuurka iyo xildhibaannada baarlamaanka cusub.
"Waqti yar baa inoo harsan, intii hore guul, wadajir iyo Soomaalinimo ayaan kusoo dhameysanay inta hartayna sidaas oo kale ayaan rajeynayaan. Waxaana sidoo kale rajeynayaa in bisha Ogoosto aan gaarno baarlamaanka oo lasoo xulay iyo dastuurka oo la ansixiyay," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale, ra'iisul wasaaruhu wuxuu u mahadceliyay odayaasha dhaqanka inay ku bixiyeen dadaal badan sidii howshan loo qaban lahaa, isagoo sheegay in howshan ay tahay waajibkii saarnaa oo ay guteen.
Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha ka socday beesha calaamka ayaa kormeer ku tagay dugsiga tababarka booliiska Soomaaliya oo lagu wado in dhowrka casho ee soo socda uu ka furmo shirka ansixinta dastuurka cusub.